Laacibkii Arsenal oo busaarad xun lasoo daristay kuna sigtay inuu naftiisa gooyo: SAWIRRO – Warfaafiye:
Emmanuel Eboué (34-jir) oo ka mid ahaa laacibiinta soo maray kooxda Arsenal ayaa nolal xumo iyo rafaad kula soo daristay magaalada London kadib markii uu lumiyay oo uu waayay wax kasta oo uu lahaa, hanti, xaas, ilmo iyo shaqo.
Laacibkan ayaa intaas oo dhibaato ah waxa ay lasoo daristay wax ka yar laba sannadood, waxaana ay waxaasi dhan bilowdeen kadib markii ay isku dheceen xaaskiisa ayna isla gaareen ilaa iyo heer maxkamadeed ugu dambeyna is fureen. Waxaa laga xukumay oo loo xukumay xaaskiisa Aurelie oo u haysa carruur saddex ah (1 wiil iyo 2 gabdhood) wax alle iyo wixii hanti ah oo uu haystay, guri, gawaari iyo lacag, waxaana uu sheegay in xitaa caruurtiisa uusan la kulmi karin uuna arki karin.
Wareysi uu siiyay jaraa`idka “The Mirror” ayuu ku sheegay in uu dhowr jeer ku fikiray in uu naftiisa gooyo si uu usoo afjaro caloolxumada nolasha lasoo daristay awgeed.
” – Ilaahay ayaan caawimaad weydiisanayaa, kaligiis ayaa iga saari kara dhibaatadan i haysata”, ayuu wareysiga ku yiri laacibkan hore oo sagaalkii sano ee uu kubadda ciyaarayay soo soo galeen malaayiin dollar ah.
Hadda waxa uu la seexdaa asxaab, waliba dhulka ayaa joodari u yaal, waxaa kale oo uu sheegay in uusan inta badan magaalada u bixin sababo la xiriira in aan wadada lagu aqoonsan. Asxaabtiisa ayaa kula talisay in uu gacanta u haatiyo asxaabtiisii ay beri waxa shaqeyn jireen si ay ugu fidiyaan gacan eyna uga saaraan dhibaatadan xagga nolosha ka haysata.
Hadalka ugu qiirada badan ee uu wareysigan ku yiri ayaa waxa uu yahay: ” Markaan TV-ga ka daawado asxaabtii aan wada ciyaari jirnay oo wali dheelaya, waan calool xumaadaa , waxaana ku fekeraa maxaad ugu dhex jiri weysay”.
FIFA ayaa xayiraad dhanka kubadda ah kusoo rogtay Mr. Eboue` kadib markii uu lacag uu ku laha ajentigiisa uu bixin waayay, waana halka ay ay uga bilaabatay culeyska nolosha.